Imibongo yothando ukuthandana Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Imibongo yothando iwele eluthandweni
6 Ukufundwa kweMin
Ndingathanda ukuba nawe iyure nganye, umzuzu kunye neyesibini kwimihla yonke ubomi bam bonke. Ndingathanda ukuziva ungowam ngayo yonke into ekubethwayo. Ndiyakuthanda!
Emehlweni akho ndiyabona ubukhulu besibhakabhaka kunye nokuhamba kweenkwenkwezi ezidlula ngokukhawuleza ukuba zingabonwa. Ukusuka kwimbono yakho ndicinga ukuba akukho zintanda zimbini njengathi kuwo wonke umhlaba. Ndiyakuthanda.
Uthando ligama elilula, njengale ndlela ndiziva ngayo ngawe: Ndiyakuthanda.
Ndiyaqaphela la luna kwaye ndiyakubona, ndicamngca ngobukhulu bolwandle kwaye ndiyaqhubeka ndikufumana. Andazi ngenene ukuba ungahamba njani kweso santya.
Ukuncamisa eyona ndoda intle emhlabeni, uncumo lwayo lwenza ukuba intliziyo yam inyikime, indenze umfazi osisityebi emhlabeni.
Ndifuna ukuba secaleni kwakho, ndifuna ukuba usondele kum, ndifuna ukuva ukufudumala kwakho. Ndikukhangele, kodwa andikufumani, uphi? Ndiyakudinga apha, ecaleni kwam, ngonaphakade kanaphakade.
Ukuthanda kulula, ukuvuma ukuba kunzima, kwaye ukulibala akunakwenzeka.
Ndingathanda ukuba sihlale sikunye, sihlale siyile nto besiyiyo, imvakalelo ehambelana nenkumbulo.
Yayiyimini yasemva kwemini ebandayo nenemvula, kodwa ndalufumana uncumo lwakho, ukusukela kuloo mzuzu yonke imihla ndihlala kunye nobushushu intliziyo yakho endinika kunye nokukhanya okuqaqambileyo kwamehlo akho.
Ndiza kuwela lonke ulwandle oluqhutywa ngamaza, ndiza kubhabha njenge-seagull, ndiyakuthanda njengaye ilanga thanda iinkwenkwezi.
Unjengenyanga ekhanya kubusuku obumnyama, xa ulapha ukhanyisa intliziyo yam, xa ungekho ndiziva ndilahlekile ngaphandle kwakho.
Ayikho enye indlela onokubaluleka ngayo ebomini bam, kuba okwethutyana ubunobomi bam bonke.
Ndingathanda ukuba ngumoya wokuphulula iinwele zakho, ube yimvula yokukucoca ngamanzi am, ube lilanga lokufudumeza umzimba wakho ...
Ndihlala ndikumamela, kuba wena, sithandwa sam, uyakwazi ukundixelela yonke into, nokuba awunalo ilizwi.
Ukuba imvula ibiluthando, ubuya kuba ngumoya olungileyo ozisa kum ukuba ubamanzise ngobuso ubuso bam kwaye undenze ndizive ndingoyena mfazi wonwabileyo emhlabeni.
Ndingathanda ukukuthanda ikhulu leminyaka kunye nosuku olunye, kodwa ngalo mhla wokugqibela, ndingathanda ukuhlala kuwo njengowokuqala endadibana naye.
Khumbula ukuba ngekhe ndiyeke ukucinga ngawe, ndikuthande, ndikuthande, kuba sele uyinto yonke ebalulekileyo ebomini bam.
Andinakulibala, nokuba ndiyazama, andinakukususa kwiingcinga zam. Uyavela emaphupheni am kwaye unike amandla emphefumlweni wam ukuze uqhubeke. Andikwazi ukuyeka ukukuthanda sithandwa sam.
Ngale ntsasa ndiyithathile intliziyo yam ebibetha ngamandla kuba ngaphakathi ibingeyakho.
Andinakukunceda ndikuthande, ndiziva ndinothando olunzulu oluzalwe emathunjini am, usuku nosuku, iveki emva kweveki.
1 Imibongo yothando iwele eluthandweni
2 Thandana nemibongo yothando
3 Iividiyo zemibongo yothando ukuba zithandane
Kwisanti yolwandle bethuna inkumbulo yezona ntsuku zethu zibalaseleyo, olo hambo lwaluvakala kuba wawusecaleni kwam.
Kuzolile kwegumbi lam uhlala ukhona, iiprojekthi zam zengqondo uzikhobokisile, azinakulibala imemori emnandi yokwanga kwakho.
Ingqele, ikhephu kunye nomkhenkce, ukuhlala wedwa, ngesiquphe bubushushu obungenantlonelo bokugqibela ngokuthatha yonke into. Wena, eyona ntwasahlobo ingalindelekanga.
Mzuzwana ngamnye odlulayo uvuthuzwa ngumoya, kwaye ziinkumbulo kuphela, umnqweno nothando oluhlala luhleli. Ukuwa eluthandweni lolona khetho lwam, nangona enyanisweni ndandingenayo enye.
Ubomi bam bebude kakhulu ngaphambi kokuba ndidibane nemilebe yakho, ubusuku bufutshane kakhulu ecaleni kwakho, imizuzwana xa undibona ungazi nto ngokungabikho kwakho.
Zinjani imilebe yomntu othandweni? Enkosi kuphela kuwe endiye ndayazi impendulo, kwaye ndafunda ukuba kukho imibuzo ethi, nangona kunzima ukuyiphendula, ingabutshintsha ubomi bakho. Enkosi ngawo onke amaxesha amnandi.
Ndikuthatha ezinzulwini zomphefumlo wam, apho kungekho mntu unokukufumana, kuba wawusoloko ungakum kwaye uya kuhlala ungam.
Izandla zethu ezichukumisayo phantsi kokukhanya kwemitha yokuqala yelanga yeyona nto ikufutshane namasango eparadesi awakha akho.
Yikholwe okanye ungakholelwa, ngoncumo lwakho sele uliphazamisile ilizwe lam liphela, kukho imifanekiso engaze ilibaleke, kukho izimbo zomzimba ezixabisekileyo.
Ngamanye amaxesha siye siqonde emva kwexesha, ukuba kuphela ngumntu olungileyo onokusisindisa kweyona ntlekele inkulu, ukuba endaweni yoko sikhetha ukuba secaleni komntu oyintlekele, siya kuhlala siphela kwimeko engenangqondo.
Ndithande njengoko bendikuthanda, undithande bonke ubomi bakho, oku kwaye mabavumele ukuba beze, kuba sisedwa kwaye emhlabeni siza kuba.
Ndathandana ngamehlo akho kuqala, emva koko ndakhangela, kodwa ngoku xa ndiwazi umphefumlo wakho ngentliziyo, ngekhe ndiphinde ndiphile ngaphandle kwawo, xa kukho into emnandi ekuhlasela ikwenze ube likhoboka lakho.
Thandana nemibongo yothando
Ndimele ndikunike uthando olungakumbi
kwaye ufumane loo "ndlu"
ube yindlwane apho ngenye imini.
omnye umntu omthandayo ufika,
kwaye uthelekelele emphefumlweni.
Musa ukuphuma kum,
Umphefumlo wam ungaphela
obu bomi abunambulelo,
oko kunika kuphela ukungathandeki
ukuba awuyazi ukuba ungayigcwalisa njani,
uyizalisa njani eyam
Kususela ebusuku kude kuse.
Ndikuthanda kangakanani, sithandwa sam. Ndikuthanda kangakanani,
Andazi namnye umthandi kwimbali
ndivakalise uthando endilubhengeza
Inamandla kwaye inomsindo kwaye inomdla.
Ndikuthanda kanjani, awunakuze undithande
kuya kufuneka uthandane njengam
kwaye ndiziva ndinqwenela ukuba nam ...
kwaye uqaphele ukuba into ethile ngaphakathi yavutha umlilo.
Ukuba isibhakabhaka sisesibhakabhaka, kodwa ngokwahlukileyo,
ukuba awuva izikhalazo zembombo,
ukuba awuwuva umlilo wengqondo yakho
kananjalo nooyeha abanye abade baphele.
Uyakukholelwa ukuba luthando, kodwa ndiyakuqinisekisa ...
ukuba soze undithande, njengoko ndikuthandayo.
Uyabona ukuba lubangelwe yintoni uthando lwethu?
Iintlungu kakhulu, iintlungu ezikhohlakeleyo zisohlwaya,
Ukuba awukho ecaleni kwam okanye mna ecaleni kwakho.
Ngamanye amaxesha ukungakhathali kuyasibetha,
Ikhwele nobukrakra busoyisile
Uxolo lwengqondo iintlungu ziyasinciphisa,
Ukuthantamisa kothando kuthi.
Ngamanye amaxesha uhamba ungafuni,
Undishiya ndilusizi kakhulu ndilahliwe,
Ke ndicinga ukuba ndiyafa yintlungu,
Kuba awukho ecaleni kwam.
Kungenxa yoko le nto ndizibuza ukuba ingaba olu thando
Kumele ukuba kunobuqaqawuli kum,
Ukuba abathandi abanomdla abanomdla,
Siza kuyila imbali entsha ngayo.
Uthini umthandi ngenzondelelo kunye nokuthantamisa,
Soloko uthandwe zizityalo zakho,
Ngokuthabatha uyonwabele ubuhle bakho,
Kwaye ngonaphakade iinyawo zakho ndiya kukudumisa.
feeds kwaye unayo
Phila ngexesha lakho,
iyavuya endaweni yakhe
kwaye ihlala ikhula ecaleni kwethu.
ezele imihlali yimihla
Idlala kunye neengelosi ezinamaphiko.
ungaze ulahlekelwe yingqondo,
Nangona ngamanye amaxesha ewe!
kuba ufana nomntwana
Dupe! Ukudlala nokudlala
Uthando lokwenene luzisa umculo
zisa amaphupha kunye nethemba
uthwala intliziyo yakhe emlanjeni wakhe
Iividiyo zemibongo yothando ukuba zithandane
[amaphepha orbital_cluster = »115,142,155,134,96,112,147,80,49,121,189,193,196,33,167,219,225,68,40,61,83,75,65,102,55,44,72,179,150,129,137,202,208,91,107,173,214,162,184,88 »6 ″ iyavela =» 6 ″]
Epreli 17, 2020
Epreli 16, 2020
Epreli 15, 2020
Imibongo yothando ebalaseleyo
Imibongo yothando kwisithandwa sam ukuba ndiyamthanda